နေ‌‌‌ဒွေး တို့  ပြသနာ ကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေရဲ့ ဝေဖန် မှတ်ချက်တွေ ကို တစ်ခွန်း ထဲ ထိထိ မိမိ တုံ့ပြန် ခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ – Shwe Ba
Homepage / Celebrity / နေ‌‌‌ဒွေး တို့  ပြသနာ ကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေရဲ့ ဝေဖန် မှတ်ချက်တွေ ကို တစ်ခွန်း ထဲ ထိထိ မိမိ တုံ့ပြန် ခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
နေ‌‌‌ဒွေး တို့  ပြသနာ ကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေရဲ့ ဝေဖန် မှတ်ချက်တွေ ကို တစ်ခွန်း ထဲ ထိထိ မိမိ တုံ့ပြန် ခဲ့တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
By Shwe BaPosted on October 23, 2020 October 23, 2020
ပရိတ် သတ် ကြီးရေ နေဒွေးနဲ့သံစဉ်မောင်တို့ရဲ့ ပြသနာထဲ မှာ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ ဂရုတစ်စိုက်စိတ်ပါဝင်ခြင်းခံရသူကတော့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းယွန်းစံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဆောင်း ယွန်းစံကတော့ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း သရုပ်ဆောင် နေဒွေးနဲ့ သံစဉ်မောင်တို့ရဲ့ ကိစ္စမှာ မဆီမဆိုင် အပြောခံနေရပြီး အထင်အမြင်လွဲခံ နေရတာကြောင့် သူမဘက်က မှန်ကန် ကင်းရှ င်းေ ကြာ င်း ပရိသတ်တွေကို ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်ေ တွက တော့အခုထိ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပြီးသူမရဲ့ ပြောစကားတွေကို ထောက်ပြပြောဆိုလာတာပါ ။
ဒီ က နေ့ မှာလည်း သရုပ်ဆောင်နေဒွေး ရဲ့ ပိုစ့်တွေ မှာ cmt ဝင်မရေးဘူးဆိုတဲ့ သူမရဲ့ စကားကို ပရိတ်သတ်တွေ က ထောက်ပြလာတဲ့ အ ပေါ် သူမကတော့ ခုလိုပဲ ဖြေရှင်းခဲ့ တာပါ။“ဒိကိ စ္စေ လးေ တာ့ ဝင်ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့နော်။ ဆောင်း like မပေး cmt မပေးဘူးဆိုတာ ကိုနေဒွေး နဲ့ သံစဉ်မောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပိုစ်တွေကို ပြောတာပါ။ ဈေးရောင်းပိုစ့်တွေ တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ ပို စ်ေ တွ မန့်ချင်မန့်မယ် စကားပြော မယ်။ ဒါေ ဆာင်းရဲ့ personal လေ။ ညီမတို့ရော ညီမတို့သူငယ်ချင်းတွေဈေးရောင်းရင် ဝင်မဝယ်ဘူးလား.? ဒါနောက်ဆုံးရှင်းတာ ။ ကျန်တာ ထင် ချင် တာထ င်တော့ .. ဟုတ်ပြီနော် ဆိုပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။
ပရိတ် သ တ်ကြီးရေ ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ ပြောခံရမယ့် ကံပါလာလို့ ပြောခံ ရတယ်လို့ ပဲမှတ်ယူထားကြောင်းမနေ့ထဲ က ပြောထားတာပါ။ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ေ ဆာင်းယွ န်းစြံ ကားကနားလည်မှုတွေအမြန်ဆုံးပြေလည်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ် နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုေ တာ င်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပရိတျ သတျ ကွီးရေ နဒှေေးနဲ့သံစဉျမောငျတို့ရဲ့ ပွသနာထဲ မှာ ပရိတျသတျတှေ ရဲ့ ဂရုတဈစိုကျစိတျပါဝငျခွငျးခံရသူကတော့ သရုပျဆောငျ ဆောငျးယှနျးစံ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ။ သရုပျဆောငျဆောငျး ယှနျးစံကတော့ သူမရဲ့ သူငယျခငျြး သရုပျဆောငျ နဒှေေးနဲ့ သံစဉျမောငျတို့ရဲ့ ကိစ်စမှာ မဆီမဆိုငျ အပွောခံနရေပွီး အထငျအမွငျလှဲခံ နရေတာကွောငျ့ သူမဘကျက မှနျကနျ ကငျးရှ ငျးေ ကွာ ငျး ပရိသတျတှကေို ရှငျးပွခဲ့ပွီးပွီ ဖွဈ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပရိတျသတျေ တှက တော့အခုထိ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိနပွေီးသူမရဲ့ ပွောစကားတှကေို ထောကျပွပွောဆိုလာတာပါ ။
ဒီ က နေ့ မှာလညျး သရုပျဆောငျနဒှေေး ရဲ့ ပိုဈ့တှေ မှာ cmt ဝငျမရေးဘူးဆိုတဲ့ သူမရဲ့ စကားကို ပရိတျသတျတှေ က ထောကျပွလာတဲ့ အ ပျေါ သူမကတော့ ခုလိုပဲ ဖွရှေငျးခဲ့ တာပါ။“ဒိကိ စ်စေ လးေ တာ့ ဝငျရှငျးသငျ့တယျထငျလို့နျော။ ဆောငျး like မပေး cmt မပေးဘူးဆိုတာ ကိုနဒှေေး နဲ့ သံစဉျမောငျနဲ့ဆိုငျတဲ့ ပိုဈတှကေို ပွောတာပါ။ ဈေးရောငျးပိုဈ့တှေ တခွားမသကျဆိုငျတဲ့ ပို ဈေ တှ မနျ့ခငျြမနျ့မယျ စကားပွော မယျ။ ဒါေ ဆာငျးရဲ့ personal လေ။ ညီမတို့ရော ညီမတို့သူငယျခငျြးတှဈေေးရောငျးရငျ ဝငျမဝယျဘူးလား.? ဒါနောကျဆုံးရှငျးတာ ။ ကနျြတာ ထငျ ခငျြ တာထ ငျတော့ .. ဟုတျပွီနျော ဆိုပွီး ပွနျလညျ ဖွရှေငျးခဲ့တာပါ။
ပရိတျ သ တျကွီးရေ ဆောငျးယှနျးစံ ကတော့ ပွောခံရမယျ့ ကံပါလာလို့ ပွောခံ ရတယျလို့ ပဲမှတျယူထားကွောငျးမနထေဲ့ က ပွောထားတာပါ။ ပရိတျသတျကွီးနဲ့ သရုပျဆောငျေ ဆာငျးယှ နျးစွံ ကားကနားလညျမှုတှအေမွနျဆုံးပွလေညျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ နျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုေ တာ ငျးပေးလိုကျပါတယျ ။
Previous post အပြစ်ဆို ဖွယ်ရာ မရှိအောင် ကို ဖြူဖွေး နုဖတ်နေ တဲ့ အသား အရည်လေး နဲ့ လှရက် လွန်းနေ တဲ့ ရွှေကစ် လေး
Next post ပြည်သူတွေ ကို နိုင်ငံတော် မှ နောက် တစ်ကြိမ် ထောက်ပံ့ ဖို့ စီစဉ်နေ တယ် လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ပြောကြား